News 18 Nepal || भारतीय कम्पनी बायोटेकको खोपलाई नेपालमा अनुमति
भारतीय कम्पनी बायोटेकको खोपलाई नेपालमा अनुमति
काठमाडौं । औषधि व्यवस्था विभागले भारतीय कम्पनी भारत बायोटेक इन्टरनेसनल लिमिटेडले उत्पान गरेको कोरोनाविरुद्धको खोपलाई नेपालमा प्रयोगको लागि अनुमति दिइएको छ ।
विभागले शुक्रबार उक्त कम्पनीले उत्पादन गरेको कोरोना भाइरसविरुद्धको ‘कोभ्याक्सिन’ नामक खोपलाई नेपालमा आकस्मिक प्रयोगका लागि अनुमति दिएको हो ।
सो खोपलाई भारतले पनि आकस्मिक प्रयोगका लागि अनुमति दिइसकेको र अन्य देशहरुमा पनि प्रयोग भइसकेको छ । विभागले औषधि तथा खोप सम्बन्धी कार्यविधिको परिधि भित्र रहेर सो कम्पनीको खोपलाई आकस्मिक प्रयोगको लागि अनुमति दिएको हो ।
सो खोप निजी क्षेत्रले खरिद गरेर नेपाल ल्याउने तयारी समेत गरिरहेका छन् । यसअघि भारतकै सेरम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड र चीनको सिनोफार्मले उत्पादन गरेको भ्याक्सिनले नेपालमा आकस्मिक प्रयोगको अनुमति पाएका थिए ।
कोभ्याक्सिन नामको कोरोना विरुद्धको खोप पनि दुई मात्रामा लगाउनुपर्छ । यो भ्याक्सिनको पहिलो डोज लगाएको २८ दिनपछि दोस्रो मात्रा लगाउनु पर्ने विभागको भनाइ छ । यस्तै यो भ्याक्सिनलाई उत्पादन मितिले ६ महिनासम्म २ देखि ८ डिग्री सेल्सियस तापक्रममा राख्न सकिन्छ ।
चीनले नेपाललाई दिने भ्याक्सिन कुन हो ? कतिको छ प्रभावकारी ?
अक्सफर्डका खोपलाई डब्ल्यूएचओले अनुमति दिँदा नेपाललाई कस्तो फाइदा ?
खानामा समावेश गर्नुहोस् यी चीजहरू, जसले कम गर्छ क्यान्सरको जोखिम
यसो भन्छन् कोरोना खोप लगाएका जनस्वास्थ्यविद् डा. पाण्डे